तिब्र गतिका धाबक बोल्टको म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्ने सपना साकार होला ? - ५ भाद्र २०७५, NepalTimes
तिब्र गतिका धाबक बोल्टको म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्ने सपना साकार होला ?
गसफोर्ड, भदौ ५
विश्वकै सर्वाधिक तिब्र गतिका धाबक उसैन बोल्टको म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट फूटबल खेल्ने सपना पूरा होला जस्तो छ । यी प्रतिभाशाली धाबक बोल्ट अस्ट्रेलियाको सेन्ट्रल कोस्ट म्यारिनर्स क्बलमा आबद्ध भई पहिलो पटक तालिममा सहभागी भएका छन् ।
हिउँदको हल्का चिसो मौसम भएपनि ग्लोब र ट्राकसुटमा सजिएका यी जमैकाली खेलाडीले मैदानमा पहिलो अभ्यास गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको ए–लीगमा रहेको म्यारिनर्स टीमले बोल्टलाई अनुबन्ध गरेको छ ।उनको बल नियन्त्रण कला राम्रै देखियो, र उनले देब्रे खुट्टा बढी चलाएको पाइयो ।
“यो एथ्लेटिक्सको ट्राक एन्ड फिल्डजस्तै हो । पहिलो दिनको तालिम जोसुकैलाई कडा नै हुने गर्दछ । कति मिहेनत गर्नुपर्ला भन्ने त बिस्तारै थाहा हुन्छ । थाहा छ, मलाई ठीकै लाग्यो,” ४५ मिनेटको अभ्यासपछि बोल्टले भने ।
अक्टोबरको अन्त्यतिर शुरु हुने २०१८÷१९ को सिजनमा ए–लीगको एक खेलाडीका रुपमा बोल्टले सहभागिता जनाउनेछन् । उनी आफूले चाहँदासम्म क्लबमै रहन सक्नेछन् ।